China 25L Plastiki Yakajeka Paint uye Lubricating Oiri fekitori uye vanotengesa | Dassaw
Divi (cm) (Wepamusoro dia * Kureba * Pazasi dia) 31.9 * 40 * 28.7
Ukobvu (cm) 0.2
Kurema (g) 1221g
Vhoriyamu 25 Liter
Bata Mapurasitiki / Simbi
Muvharo Flat epurasitiki muvharo une misodzi-kubva chisimbiso tambo / Lid ine diki kuvhura & kubvarura-kure chisimbiso tambo
MOQ, seta 500
Mapurasitiki mabhaketi anoshandisa mhando yepamusoro PP zvinhu.
Flat Lid uye Lid ine samll kuvhura aya maviri marudzi emabhidha anogona kusarudzwa.
Ruvara uye Logo kudhinda kuburikidza nesilika kudhinda kana kupisa kupisa kudhinda.
1. Ruvara uye kukura zvinogona customized.
2. Tine mavhoriyamu akasiyana siyana ezvinodiwa nevatengi.
3. Tinogona kudhinda chero logo uye chero ruvara senge skrini yekudhinda, kupisa kutsika, uye isu zvakare tinopa zvinyorwa zvekudhinda.
4. Zvakafuma ruzivo uye sevhisi yakanaka
5. 100% nyowani zvinhu, Chikafu Giredhi.
Iwo mabhakiti epurasitiki anotakurika uye akawanda anoshandiswa. Iyo migomo inogona kushandiswa kupenda, mafuta, pendi, kuwacha mbichana uye zvimwe zvigadzirwa. Flat muvharo mhando inoshandiswa kumakemikari zvigadzirwa kuchengetedza, kuvhara uye kuchengeteka.
Yakavharwa neiyo diki yekuvhura mhando inonyanya kushandiswa kwemvura senge mafuta ekuzora uye sipo, zvinonyanya kudira. Iyo chivharo chine musuwo mudiki inogona kudzvanywa nepombi inoenderana. Nenzira iyoyo, vashandisi vanongoda Dhinda pombi iyo mvura ichadurura. Zvakanyatsojeka. Vakuru nevana zvese vanogona kushanda zviri nyore.
Bhakiti rinogona zvakare kushandiswa Izvo Rinogona zvakare kushandiswa kune zvekunze zviitiko, sekuredza kubata hove mhenyu.
Isu tine yakatsiga stock, kazhinji ese marudzi emabuckets anogona kuunzwa mukati mevhiki. Bhakiti rinogona kuunganidzwa imwe nechengetedzo yekuendesa nzvimbo uye kudzikisa mutengo wekutakura.
Pashure: Wholesale 20L Ruvara rwePurasitiki Paint Mabhaketi / Pail / Barrel / Drum ine Lids uye Pazvibato
Zvadaro: 50L Plastiki Mecidal Shandisa Yakakwira Hwakanaka nePedal uye Wheelie Bins
2.5L High Quality Food Grade Plastic Bhakiti Bar ...
20L Factory Sale 5 Gallon Round Plastic bhakiti ...
Chinese Fekitori Chikafu Giredhi 5L epurasitiki Mabhokisi w ...
High Quality 1-25 Liter Plastic Paint Mabhaki w ...